योसेमाइट र आईओएस | | मा कसरी ह्यान्ड अफ सेट अप गर्ने र प्रयोग गर्ने आईफोन समाचार
योसेमाइट र आईओएस Hand मा कसरी ह्यान्ड अफ सेट अप गर्ने र प्रयोग गर्ने
कारमेन रोड्रिग्ज | | आईफोन समाचार, iOS 8
अब जब हामी सबै OS X, Yosemite को लागि नयाँ अपरेटि operating प्रणाली जारी गर्दैछौं, हामी केहि प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्छौं जुन अनुमति दिन्छ बिभिन्न उपकरणहरूका बीच कामको निरन्तरता। ह्यान्डअफ एउटा यस्तो प्रकार्य हो जुन तपाईंलाई कार्य सुरू गर्न, आईप्याडमा पछ्याउन र म्याकमा समाप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
मूल कुरा यो छ कि हामीसँग हुनुपर्दछ आईफोन र आईप्याडमा आईओएस (पछिल्लो संस्करण) र म्याकमा योसेमाइट। ती सबैमा तपाईसँग दर्ता हुनुपर्दछ उही एप्पल आईडी, वा के उही हो, तपाईंसँग उही आईक्लाउड खाता छ र त्यो ब्लुटुथ खुला छ। यो अन्तिम बिन्दु याद राख्नु महत्वपूर्ण छ, किनकि iMac मा, सामानहरू पहिले नै हामीलाई BT मार्फत जडान गराउँदछ, तर म्याकबुक र iOS मा, हामी सामान्यतया ब्लुटुथ बन्द छ।
यसले हाल एप्पल अनुप्रयोगहरू जस्तै मेल, सम्पर्कहरू, क्यालेन्डर, सफारी, रिमाइन्डरहरू, सन्देशहरू, नक्सा, पृष्ठहरू, नम्बरहरू, र कीनोटसँग कार्य गर्दछ। विकासकर्ताहरूले निरन्तरता कार्यक्षमता पनि थप्न सक्दछन्, तर आज हामी माथिको कुनै पनि प्रयोग गर्नको लागि यसलाई कन्फिगर गर्नमा केन्द्रित छौं।
ह्यान्डअफले काम गर्नका लागि हार्डवेयरको सर्तमा, तपाईंसँग आईम्याक, म्याकबुक एयर, २०१२ वा पछिदेखि वा म्याक प्रो २०१ late पछि आवाश्यक पर्दछ। अनुकूल आईओएस उपकरणहरू आईफोन or वा पछि आईप्याड (th औं पिढी), आईप्याड एयर हुन्। , आईप्याड मिनी, रेटिना डिस्प्लेको साथ आईप्याड मिनी, र आईपड टच (2012th औं पीढी)।
केहि प्रदर्शन तिनीहरूलाई विशिष्ट सर्तहरू आवश्यक छ र अन्यसँग टेलिफोन कम्पनीहरूबाट शुल्कहरू हुन्छन्, जस्तै कल वा एसएमएस।
ह्यान्डअफलाई आईओएस with को साथ आईओएस उपकरण चाहिन्छ।
कलहरूलाई आईओएस with को साथ आईफोन चाहिन्छ।
आईओएस .8.1.१ को साथ आईफोन एसएमएसको लागि आवश्यक छ।
तत्काल हटस्पट एक आईफोन वा आईप्याड एक डेटा जडान र आईओएस .8.1.१ को साथ आवाश्यक हुन्छ। यस सेवाको उपलब्धतालाई तपाईंको अपरेटरसँग जाँच गर्नुहोस्।
सम्झनुहोस् कि यसलाई आवश्यक छ:
उही खाता आईक्लाउड
ब्लुटुथ सक्रिय भयो।
उपकरणहरूको दायरा भित्र हुनु पर्छ दस मिटर एक अर्का।
आईफोनमा जाऔं र हामी मार्ग अनुसरण गर्छौं: सेटिंग्स > सामान्य > ह्यान्डअफ र सुझाव गरिएका अनुप्रयोगहरू र हामी जाँच गर्छौं कि हामी संचालित छौं ह्यान्डअफ.
म्याकमा जाऔं, हामी खोल्छौं प्रणाली प्राथमिकताहरू > सामान्य र हामी पुष्टि गर्छौं कि हामीले ट्याब सक्रिय गरेका छौं प्रयोगको अनुमति दिन्छ ह्यान्डअफ.
ह्यान्डअफ काम गर्नका लागि, उपकरण जुन सुरूमा काम गरिरहेको थियो हुनु पर्छ परिचालन र अनलक। त्यसो भए, उदाहरण को लागी, यदि तपाई आईप्याड मा एक वेब पेज देख्दै हुनुहुन्छ र आईप्याड स्वचालित रुपमा लक हुन्छ, तपाई म्याक वा आईफोनमा काम गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्न जागी र आईप्याडलाई पहिले अनलक नगरी।
मा अधिक जानकारी को लागी निरन्तरता प्रकार्यहरू, तपाईंसँग केही प्रारम्भिक सुविधाहरू छन् एप्पल वेबसाइट।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 8 » योसेमाइट र आईओएस Hand मा कसरी ह्यान्ड अफ सेट अप गर्ने र प्रयोग गर्ने
डेनियल स्थिरिनो भन्यो
के निरन्तरता तपाईंको लागि म्याकबाट आईप्याड र यसको विपरित काम गर्दछ?
डेनियल कन्स्टान्टिनोलाई जवाफ दिनुहोस्
इमेक मध्य २०११ र आईफोन s एस आईओएस in मा, कलले मेरो लागि एक क्षणको लागि काम गर्यो र फेरि कहिल्यै…। म "सम्पर्कहरू" बाट कल गर्न सक्दछु र तिनीहरूलाई म्याममा प्राप्त गर्दछु…।
के मैले आईक्लाउड सक्रिय गर्नु पर्छ? ब्लुटुथले यसलाई बन्द गरेको बेला यो बन्द थियो… .. (पर्याप्त सिद्धान्त मा WIFI संग)
मलाई थाहा छैन किन यसले काम गर्दैन ...
कृपया राम्रो गाइड ...। यो धेरै मान्छेलाई हुन्छ !!!
Llasjd लाई जवाफ दिनुहोस्
यो केवल तपाईलाई मात्र हुने गर्छ, बाँकीमा मात्र यसले विकासकर्ताले तोकेको रूपमा काम गर्दछ, त्यसैले तपाईं राम्रोसँग आफ्नो टिप्पणीहरू राख्नुहुन्छ र विशेष गरी तपाईंको आफ्नै आवश्यकताहरू, सबैको होइन, किनकि जब तपाईं सपना देख्नुहुन्छ कि यसले उपकरणहरूमा जुन तपाईंको लागि काम गर्दैन। तिनीहरूसँग ओएसमा वा सञ्जालमा छ जुन यसले काम गर्दैन।
Your तपाइँका टिप्पणीहरू सुरक्षित गर्नुहोस् »कस्तूरी» ... यस केटीको बारेमा ...
M4ndr4k3 लाई जवाफ दिनुहोस्
पहिलो, मलाई तपाईंको पोष्टमा एक आगन्तुकलाई तपाईंको प्रतिक्रिया मनपर्दैन, त्यहाँ तरीका र तरीकाहरू छन्।
दोस्रो, मसँग iMac मध्य २०११ पनि छ र तपाईं केवल फोन कलहरू गर्न र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनभने, अन्य कार्यहरूसँग विपरित, यसले ब्लुटुथ प्रयोग गर्दैन तर WIFI लाइन प्रयोग गर्दैन।
सालकीलाई जवाफ दिनुहोस्
अह, अब भर्खरको आईओएस अपडेटको साथ तपाईं एसएमएस पठाउन पनि सक्नुहुनेछ !!!!!
ठीक छ, सहकर्मीको टिप्पणी सही छ, ब्लुटुथ प्लग इन हुनु आवश्यक छैन, उही वाइफाइमा भएको कारण त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा छ।
तपाईंको टिप्पणी कार्मेन पूर्ण रूपमा बाहिर छ, दुबै फारम र कारणमा।
"हामीले गर्नु पर्छ"
ठिकै, तिनीहरूले मलाई नराम्रो हिसाबले निराश पारे ...… मसँग २०११ आईम्याक छ, एक शीर्ष-श्रेणीको आई i, १ जीबी एचडी 2011 7०6970० ग्राफिक्सको साथ, १ GB जीबी र्याम छ र तिनीहरूले मलाई ह्यान्डअफ प्रयोग गर्न दिदैन…। ।
उनीहरूले मलाई कम्प्युटर बदल्न बाध्य पार्छ जुन अझै वारेन्टीमा छ, २०११ मा भएको साधारण तथ्यको लागि, जब अझै २०१ 2011 वा २०१ from बाट कम शक्तिशाली iMacs छन्…।
तिनीहरूलाई यो मोबाइलको साथ गरौं, हुन्छ, तर आईम्याक्सको साथ ...
DonVito लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईं जस्तै स्थितिमा छु, यो देख्दा मलाई ठूलो निराशा भयो कि म मेरो आईम्याकमा ह्यान्डअफ सक्रिय गर्न सक्दिन ... यस कारणले मैले हार्डवेयरको आवश्यकतालाई याद गरें, कि यो "सानो" विवरण टिप्पणी गर्न छोडियो।
म अनुसन्धान गर्दै छु र यो ब्लुटुथ संस्करणसँग गर्नुपर्दछ जस्तो देखिन्छ र स्पष्टतः यसको क्षमता ...
अभिवादन र तपाईंको योगदानको लागि धन्यवाद!
के म देख्छु त्यहाँ धेरै चीजहरू काम गर्दैनन् जुन म्याक २०१२ वा त्यसपछिको होईन भने, यो मेरो केस हो, मसँग २०१० को अन्त्यबाट एयर छ र न त त्यो नै छ न त एयरप्राप hone आईफोनको साथ।
टेक्सासलाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई लाजमर्दो लाग्छ कि तिनीहरूले डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमलाई "क्याप" गरे ... कम्प्युटरमा जुन २०१ 2014 को भन्दा अझ शक्तिशाली छ ...
मोबाइल उपकरणहरूमा, म बुझ्छु कि आईओएस क्यापिन, तर डेस्कटपहरू र यी मूर्खताहरूमा, म यसलाई हास्यास्पद पाउँछु,,
उनीहरूसँग केहि छैन, तिनीहरूलाई ब्लुटुथ or वा कम ऊर्जा चाहिन्छ, तिनीहरूले भने कि तिनीहरू यसलाई पुरानो म्याकमा ल्याउन कोशिस गर्दै थिए, हुनसक्छ भविष्यमा।
र कम उर्जाले यसको साथमा के गर्नुपर्दछ? यो आईम्याकसँग जोडिएको हो कि कुनै पनि केसमा अधिक खर्च गर्दछ, आईफोन होइन ...
तर यो आईफोन मा २.१ प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। यो एक सेवा हो कि व्यावहारिक रूप बाट सक्रिय छ, त्यसैले मोबाइल ब्याट्री केहि घण्टा लामो छैन। मैले एउटा ब्लगमा पढेको छु कि उनीहरूले ब्लुटुथ pen.० पेन खरीद गरेर यसलाई काममा ल्याउन मद्दत गर्दछन्, तर मलाई थाहा छैन तिनीहरू सबै अनुकूल छन् कि छैन।
डेफलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो २०१२ को मध्यदेखि म्याकबुक प्रो छ र आज दिउँसो मैले म्याक मार्फत कलहरू गरें र प्राप्त गरे तर म निरन्तरता पाइन। मसँग सबै राम्रा कन्फिगर गरिएको छ।
म्याकबुक प्रो अक्टुबर वा नोभेम्बर २०१२ मा बाहिर आईरहेको थियो, मलाई सहि मिति याद छैन। IOS 2012.०.२ को साथ आईफोन with का साथ परीक्षण गर्छु
धेरै खराब एप्पलको बारेमा धेरै खराब म २००० लाई खर्च गर्ने छैन hand केवल ह्यान्डअफ प्रयोग गर्न
Lokosw लाई जवाफ दिनुहोस्
कलहरू मेरो लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछन्, अपेक्षानुसार, त्यस्तो समयहरू हुन्छन् जब ती गर्दैनन्।
ह्यान्डअफका लागि यो आईप्याड वा आईफोनबाट इमेकमा काम गर्दछ तर इमेकबाट आईफोनमा म आइकन पाउँदिन।
तिमीलाई थाहा छ यो किन हुन सक्छ
एसिडबर्मलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले कलको समस्यामा प्रस्ताव गर्दछ जुन अन्य उपकरणहरूमा स्थानान्तरण हुँदैन वा तपाईंले ह्यान्डअफ आइकनहरू देख्नुहुन्न।
१. निश्चित गर्नुहोस् कि उपकरणहरूले आईओएस or वा पछिल्लो प्रयोग गर्दछ; यो गर्नका लागि सेटिंग्स> सामान्य> सफ्टवेयर अपडेटमा जानुहोस्।
२. सेटिंग्स जाँच गर्नुहोस्:
Settings सेटिंग्स> Wi-Fi मा जानुहोस् र Wi-Fi खोल्नुहोस्, यदि आवश्यक छ भने।
Settings सेटि Settingsहरूमा जानुहोस्> ब्लुटुथ र ब्लुटुथ सक्षम गर्नुहोस्, यदि आवश्यक छ भने।
▪ निश्चित गर्नुहोस् कि आईओएस उपकरणहरू उही Wi-Fi नेटवर्कमा जडित छन्; यो गर्नका लागि सेटिंग्स> Wi-Fi मा जानुहोस् र प्रत्येकको जडान भएको नेटवर्कको नाम तुलना गर्नुहोस्।
Settings सेटि Settingsहरूमा जानुहोस्> सामान्य> ह्यान्डअफ र सुझाव गरिएका अनुप्रयोगहरू र ह्यान्डअफ अन गर्नुहोस्।
Settings सेटिंग्स> फोनमा जानुहोस् र Wi-Fi कलि off बन्द गर्नुहोस्।
म आशा गर्छु कि यसले तपाईंको लागि काम गर्दछ !!!
नमस्ते मसँग आईओएस .8.1.१ र योसेमाइट १०.१० छ र मलाई यो थाँनी छैन कि मैले हानोफलाई कसरी काम गर्नुपर्दछ आईफोन र म्याकमा सक्रिय भएता पनि। म वाइफाइ बिना काम गर्दैछु, भनेको छ, साझा कनेक्शन र आईफोनको g जी को गोली। म निश्चित छु कि म केहि गलत गर्दैछु। धन्यबाद
म्याक्सिमिनोलाई जवाफ दिनुहोस्
खैर, राम्रो छ, तिनीहरू २०११ बाट म्याकबुक प्रोमा चीजहरूलाई अनुमति दिदैनन्। एप्पलले के चाहान्छ, हामीलाई पनि म्याकबुक प्रो परिवर्तन गर्न बाध्य पार्छ जुन पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। यो योजनाबद्ध अप्रचलन जुन एप्पल एकदम आक्रामक रूपमा लागू हुन्छ मलाई एप्पल उत्पादनहरू खरीद गर्न जारी राख्न कि भनेर श doubt्का गरिरहेको छ। जब म केहि खरीद गर्छु भने म यसको ख्याल राख्छु ताकि यो मेरो लागि राम्रोसँग राम्रोसँग काम गर्दछ, र एप्पलको साथ म यसलाई लागू गर्न सक्दिन किनकि तिनीहरू "टाढाको रूपमा क्षति पुर्‍याउने" आरोपमा छन्।
yojar ओनैराम भन्यो
मलाई याद छ जब स्याउमा सबै कुरा सजिलो थियो…। यी केटाहरूले हामीलाई बौलाहा बनाउँदछन्…।
स्टीव जॉब्सले "हामी पनि त्यहि गर्छौं तर हामी यसलाई सजिलो बनाउँदछ" भन्ने गर्थ्यौं !! त्यो के भयो !!
Yojar onairam लाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, म २०१० बाट म्याकबुकप्रो र आईफोन between बीच वाइफाइको साथ राम्रा कलहरू प्राप्त गर्छु र कल गर्दछु। के काम गर्दैन भने निरन्तरता हो, तर कलहरू दुध हुन्!
तिनीहरू भन्छन् कि यदि तपाईं एक USB ब्लूटूथ put.० सबै काम गर्दछ।
PabloRA लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि यो समाधानले धेरैको सेवा गर्दछ र केही बचाउनेछ - ती मानिसहरूका लागि जो पहिले नै बीटी परिवर्तन गर्ने बारे सोच्दै थिए।
ह्यान्डअफ म्याक एयर २०११ मा फिक्स गरियो - आईफोन ss को साथ परीक्षण गरीएको थियो।
प्रक्रियामा दर्साईए अनुसार पहिलो चीज, तपाईंको ब्लुटुथ बोर्ड BT ले उपयुक्त छ कि भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् (यदि यो होईन भने, प्रयास नगर्नुहोस्):
म्याकमा, एप्पल आईकनमा जानुहोस्, "यस म्याकको बारेमा", "प्रणाली रिपोर्ट ..." हो "।
स्रोत र क्रेडिट:
Rich67801 लाई जवाफ दिनुहोस्
एडर ग्रान्डा मन्टिल्ला भन्यो
हेलो, मैले ट्यूटोरियलको चरणहरू अनुसरण गरेको छु र मेरो लागि म्यास बुक प्रो मार्फत कल गर्न सक्षम हुनु बाहेक सबै कुराले काम गर्दछ मसँग आईफोन s एस छ जुन मलाई हराइरहेको छ। कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्
एडर ग्रान्डा मन्टीलालाई जवाफ दिनुहोस्
उमर गोन्जालेज जादुर भन्यो
नमस्ते मसँग २०१२ बीचको रेटिना १ 2012 र आईफोन ss को एक म्याकबुक छ ... कल छ त्यहाँ कुनै समस्या छैन तर निरन्तरता छैन त्यहाँ कुनै केस छैन जुन मैले सबै गरें र यसले काम गरेन… A can !!! मलाई आशा छ तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ!
उमर गोन्जालेज जादुरलाई जवाफ दिनुहोस्
हेक्टर सेगरा ब्यारोन भन्यो
ठीक छ, म संग मैले यो पहिले नै परिमार्जन गर्न एक किट देखेको छु र कुनै समस्या बिना म्याक प्रयोग गर्न सक्षम हुन, म पहिले नै आईफोन spent संग खर्च गरे र बाहिर म एक आईफोन ss फेरि को रूप मा एक डिजाइन को रूप मा अर्को परिवर्तन को नेटवर्क मा गिर छैन। साम, यति सुन्दर बिना तिनीहरू मलाई डराउन थाल्छन् ……।
हेक्टर सेगरा ब्यारनलाई जवाफ दिनुहोस्
एलिटो (@ अलि_डाले) भन्यो
मसँग पहिले नै समाधान छ, जुन वास्तवमै मलाई भयो, उनीहरूले जे भन्छन्, धन्यवाद, खोजी गरेर र सिकेको कुराबाट। के गर्न आवश्यक छ म्याकको PRAM मेमोरी रिसेट गर्नु हो, २०११ पछि। तर पहिले, यो निम्न अनुसार एक फोल्डर मेटाउन आवश्यक छ:
हामी हार्ड ड्राइभमा प्रवेश गर्छौं (सामान्यतया म्याकिन्टस एचडी), त्यहाँबाट हामी लाइब्रेरीमा जान्छौं, र अन्तमा हामी प्राथमिकता फोल्डर खोल्छौं।
अब हामी प्रणाली कन्फिगरेसन फोल्डर मेटाउछौं, कुनै डर बिना, यसले हामीलाई प्रशासक अनुमतिहरूको लागि सोध्नेछ, तर यो रद्दीटोकरीको लागि केही पनि छैन।
त्यसो भए हामीले कम्प्युटर बन्द गर्‍यौं वा पुनःस्टार्ट गर्न सक्दछौं र पावर-अन ध्वनि अघि सेन्टिमेड + Alt + P + R कुञ्जीहरू थिचेर, यो अलि जटिल छ तर यो गर्न सकिन्छ। जब हामी यो संयोजन थिच्दछौं, उपकरणहरू धेरै पटक खोल्नेछ केवल "Gong" आवाज मात्र पुग्ने भागमा पुग्न, यसलाई कल गर्न हामी यसलाई it पटक नभएसम्म यसलाई थिच्दछौं। एउटा विवरण, यो बाँया Alt हुनुपर्दछ।
एक पटक जब यो तेस्रो पटक लाग्छ भने हामी जान दिनुहोस् र टीमलाई सामान्य रूपमा जारी राख्न दिनुहोस्।
तयार छ, समस्या समाधान भयो।
यो सबै BT मा छ
Alito (@Ali_Dalay) लाई जवाफ दिनुहोस्
मध्या २०१२ को मध्यमा म्याकबुक प्रो, एक आईफोन s एस र आईप्याड मिनी रेटिना स्क्रिनको साथ, तर म्याक र आईफोनको बीचमा पहिले राम्रोसँग काम गरें अब यदि यो आईप्याड आईफोन र यसको विपरित जडान हुन्छ तर यसले मलाई अनुमति दिदैन। म्याकसँग जोड्ने कसैसँग समाधान छ? र यो कन्फिगरेसनको प्रश्न होईन किनकि मैले पहिले नै तीन विचारहरुमा ह्यान्ड अफ कन्फिगर गरें र मँ उनिसँग समान एप्पल आईडी, उही वाइफाइ नेटवर्क र सबै तीन जना ब्लुटुथको साथ छन्।
DannSierra लाई जवाफ दिनुहोस्
एन्ड्रेस गियो भन्यो
शुभ प्रभात मसँग आईफोन s एस र म्याकबुक प्रो २०१ they छ ​​तिनीहरू काम गर्न चाहँदैनन्, मेरो आईफोनमा यसको एक हात छैन।
Andres guio लाई जवाफ दिनुहोस्
सबैलाई नमस्कार र अग्रिम धन्यवाद!
मलाई मेरो आईफोन Personal को व्यक्तिगत हटस्पटसँग समस्या छ। यो मेरो लागि काम गर्दैन, केवल लोडिंग आइकन देखा पर्दछ र यसले मलाई इन्टरनेट साझेदारी गर्न यसलाई सक्रिय गर्न कहिल्यै अनुमति दिँदैन। एप्पलमा तिनीहरूले मलाई भने कि मेरो फोन कम्पनीले यो सक्रिय गर्नुपर्दछ र अझै केहि पनि छैन। मेरो बहिनीसँग उस्तै फोन कम्पनीको साथ सामसु। छ र यसले उनको लागि काम गर्दछ।
यदि कसैले मलाई कसरी मद्दत गर्ने जानेको छ भने म यसलाई धेरै प्रशंसा गर्छु!
जे लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल सिम, कुनै एक अपरेटर को लागी एकल सिम
यदि तपाईको आईफोनमा ढिलो गति भिडियो फिक्का छ भने, चिन्ता नलिनुहोस्, यो भाँचिएको छैन